भक्तपुरका अस्पताल भन्छन् : थप संक्रमित भर्ना गर्न सक्दैनौं, प्रजिअ भन्छन् : त्यसो भन्न पाइँदैन « AayoMail
भक्तपुरका अस्पताल भन्छन् : थप संक्रमित भर्ना गर्न सक्दैनौं, प्रजिअ भन्छन् : त्यसो भन्न पाइँदैन
समूह चरणको अन्तिम खेलमा जित निकाल्दै डेनमार्क नकआउट…
काठमाडौं – युरोकप अन्तर्गत समूह ‘बी’ मा रहेको डेनमार्कको अन्तिम
बाढी-पहिरोमा परी एक सातामा २० को मृत्यु
काठमाडौं – मनसुनपछिको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको
अक्सिजन अभाव भएको भन्दै भक्तपुरका अस्पतालहरुले थप नयाँ कोरोना संक्रमितका बिरामीलाई भर्ना नलिने बताएका छन्। सरकारले पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै अस्पतालहरुले नयाँ बिरामी भर्ना लिन नसकिने बताएका छन्।
भक्तपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. सुनिल ढुंगेलले अक्सिजनको व्यवस्था नभएसम्म नयाँ भर्ना लिन नसकिने बताए। ‘अहिलेका सबै बिरामीको लागि अक्सिजन चाहिन्छ’, ढुंगेलले भने, ‘अक्सिजन नभई बिरामीमात्र भर्ना गरेर के गर्ने? बिरामी छट्पटिइरहेको टुलुटुलु हेरिरहने?’
मन्त्रलायले कोटामा जम्मा ५० सिलिन्डर अक्सिजन मात्र परेको उनले सुनाए। ‘अहिले आइसियुमा नै दिनको करिब ४० वटा अक्सिजन चाहिन्छ। त्यो ५० वटाले के गर्ने?’, उनले आयोमेललाई भने, ‘फेरि कोटामा परेको ५० वटा अक्सिजन पनि सप्लायर्सले दिन सक्दिन भनिसकेपछि हामीले मात्र के गर्ने?’
‘अक्सिजनको अभाव भएपछि केहीलाई अन्त रिफर गरेर अहिले ६५ जना बिरामीको उपचार गरिहेका छौं’, उनले भने, ‘त्यो पनि अब जसोतसो अक्सिजन मिलाएर गरिहेका छौं। कति दिनसम्म गर्न सकिन्छ थाहा छैन।’ उनले भक्तपुरका अधिकांश अस्पतालहरुको अवस्था यस्तै रहेको जानकारी दिए।
त्यस्तै मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा अवस्थित मध्यपुर अस्पतालले कोभिडका नयाँ बिरामी भर्ना नगर्ने भनेर आज विज्ञप्तिसमेत निकालिसकेको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा बढ्दा अक्सिजनको चरम अभाव भएकाले थप बिरामी भर्ना गरी उपचार गर्न नसकिने अस्पतालले जनाएको छ।
अस्पतालका अध्यक्ष विष्णुराज कार्कीले अक्सिजन सहज रुपमा आएपछि अस्पतालले फूल फेजमा काम गर्न सक्ने बताए। कार्कीले जतिसक्दो चाँडो अक्सिजन आपूर्ति सहज गरिदिन सरोकारवालालाई आग्रह गरे। उनले हाल उपचाररत बिरामीको उपचारमा पनि कठिनाई भएको र जसोतसो उपचार गरिरहेको जानकारी दिए।
त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाले संचालन गरेका ख्वप अस्पतालमा पनि बिरामीले भरिएको जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्रका इन्चार्ज रत्नसुन्दर लासिवाले बताए। उनले त्यहाँ पनि अहिले अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई भर्ना लिन कठिन भएको बताए।
यता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले अस्पतालले बिरामी भर्ना लिन्न भन्न नपाउने बताउँछन। ‘अक्सिजन अभावको कारण बिरामी भर्ना नलिने भनेर कहाँ हुन्छ?’, भट्टराई भने, ‘अक्सिजनको अभाव नेपालभरि नै भएको सबैलाई अवगत नै छ। सबै अस्पतालहरुले अक्सिजन अभावको कारण बिरामी भर्ना नलिने भन्यो भने बिरामी कहाँ जान्छ?’, आयोमेलसँग उनले भने।
मंगलबार भक्तपुरका सबै अस्पतालमा अक्सिजनको कमी भएको उनले स्वीकारे। ‘भक्तपुर अस्पताललाई थप अक्सिजन वितरण गर्न आज बेलुकासम्म चिठी लेखेर पठाउँछौ’, उनले भने। साथै अक्सिजन सप्लायर्समा सुरक्षाकर्मी राखेर वितरण गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए।
‘समय-समयमा सप्लायर्समा अनुगमन गर्नेछौं’, उनले भने।
समूह चरणको अन्तिम खेलमा जित निकाल्दै डेनमार्क नकआउट चरणमा
काठमाडौं – युरोकप अन्तर्गत समूह ‘बी’ मा रहेको डेनमार्कको अन्तिम खेलमा भाग्य चम्किएको छ। यसअघिका दुवै खेलमा पराजय बेहोरेको डेनमार्क
काठमाडौं – मनसुनपछिको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरो र डुबानमा परी पछिल्लो एक सातामा २० जनाको मृत्यु